VOA Burmese News, 330 Independence Ave., S.W., Washington D.C., DC (2021)
The Voice of America,adynamic multimedia broadcaster funded by the U.S. Government, broadcasts accurate, balanced, and comprehensive news and information.
VOA news will be accurate, objective and comprehensive.The Reliable News Team with talented news The Reliable News Team with talented news reporters to cover news and feature stories of Burma and the World.
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်အရေးပေါ်ကာလအတွင်း ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် အထောက်အထားမရှိတဲ့ မြန်မာအပါအ၀င် လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား သုံးနိုင်ငံက လုပ်သားတွေကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ အထောက်အထား လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးဖို့ ထိုင်းအစိုးရက စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မအေးအေးမာ သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်အရေးပေါ်ကာလအတွင်း ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် ထိုင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးက အထောက်အထားမဲ့တွေကို အလုပ်လုပ်ခွင့် လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားချက်ကို ထိုင်းအစိုးရက ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပါ။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်ရေး ကွန်ယက်ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော်ကတော့အခုလိုသုံးသပ်ပြောပါတယ်။
" ကမ္ဘာ့ကူးစက်မြန် ကပ်ရောဂါ Covid 19 ဖြစ်နေတဲ့ ကာလမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိပြီးသား မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို အစရှိတဲ့သူတွေကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စာရွက်စာတမ်း ပြတ်သွားတာ (အလုပ်လုပ်ခွင့်သက်တမ်းထပ်မဆက်နိုင်တာ) ၊ ကုန်ဆုံးသွားတာတွေကို ဖြေလျှော့ပေးတာ မှန်ပေမယ့် လုပ်သားတွေကိုလည်း ပြန်ရသလို၊ လုပ်သားတွေဆီကနေ သက်တမ်းတိုးမယ့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရရှိလာမယ့် ငွေကြေး ကလည်းအများကြီးပါခင်ဗျ။ နံပါတ်(၁) က သူရဲ့ စီပွားရေး ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေ မကျဆင်းအောင် ရှိပြီးသား လုပ်သားတွေအားလုံးကို ပြန်ထိန်း လိုက်တာ။ နံပါတ် (၂)ကတော့ လက်ရှိဖြေလျှော့ပေးတယ်လို့ ကမ္ဘာကိုကြေညာ ပေမယ့်လည်း သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေ ရရှိအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတခုလို့ပဲ သုံးသပ်တယ်ခင်ဗျ။ "
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်း ဖြစ်ချိန်တုန်းကလည်း အခုလိုမျိုး ပန်းရောက်ကဒ်လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ အထောက်အထား လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးဖို့ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကလည်း မြန်မာလုပ်သားတွေ သိန်းနဲ့ချီပြီး အထောက်အထားတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလုပ်ပေးမယ့် အထောက်အထားလက်မှတ်ကတော့ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလလယ် အထိ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထောက်အထားလက်မှတ် မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတွက်တော့ ဒီလက်မှတ်ထုတ်ပေးမယ့် အစီစဉ်ဟာ အကျိုးရှိပါတယ်လို့ ဦးအောင်ကျော်ကဆိုပါတယ်။
" တရားမ၀င်နေထိုင်ပြီး ဘာစာရွက်စာတမ်းမှ မရှိဘဲ လုပ်နေရင်တော့ အလုပ်ရှင်တွေကလည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ နှုန်းထားတွေ အတိုင်းမပေးဘဲ ထင်သလိုခိုင်းနေမှာ၊ ထင်သလိုလုပ်ကိုင်နေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကအကျိုးအမြတ်တော့ရှိပါတယ်။ "
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ရောက်ရှိနေပြီးသား အထောက်အထားမဲ့တွေအတွက် လာမယ့် အောက်တိုိဘာလက စပြီး လက်မှတ်တွေ စလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထောက်အထား လက်မှတ်တွေဟာ နယ်မြေတခုနဲ့တခု ဖြတ်ကျော်သွားလာခွင့်တွေတော့ မရှိပါဘူး။
ထိုင်းအစိုးရကတော့ ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့် ကျဆင်းနေတဲ့ စီးပွားရေးကို နာလန်ထူနိုင်ဖို့အတွက် အောက်တိုဘာလက စပြီး ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ပြည်နယ်တချို့မှာ ဖြေလျှော့မှုတွေ လုပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက စပြီး မြန်မာအပါအ၀င် အိမ်နီးချင်းနယ်စပ်တွေကို ပြန်ဖွင့်ဖို့လည်း ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
အထောကျအထားမဲ့ ပွညျပလုပျသားတှကေို ထိုငျးအစိုးရ အထောကျအထား ထုတျပေးမညျ
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကိုဗဈအရေးပျေါကာလအတှငျး ကပျရောဂါကာကှယျရေးကို ထိထိရောကျရောကျ လုပျဆောငျနိုငျဖို့ အတှကျ အထောကျအထားမရှိတဲ့ မွနျမာအပါအဝငျ လာအို၊ ကမ်ဘောဒီးယား သုံးနိုငျငံက လုပျသားတှကေို ၂၀၂၃ ခုနှဈအထိ အလုပျလုပျခှငျ့ရှိတဲ့ အထောကျအထား လကျမှတျတှေ ထုတျပေးဖို့ ထိုငျးအစိုးရက စကျတငျဘာလ ၂၈ ရကျနမှေ့ာ အတညျပွုပေးလိုကျပါတယျ။ ထိုငျးအခွစေိုကျ ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ မအေးအေးမာ သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကိုဗဈအရေးပျေါကာလအတှငျး ကပျရောဂါကာကှယျရေးကို ထိထိရောကျရောကျ လုပျဆောငျနိုငျဖို့ အတှကျ ထိုငျး အလုပျသမားဝနျကွီးက အထောကျအထားမဲ့တှကေို အလုပျလုပျခှငျ့ လကျမှတျတှေ ထုတျပေးဖို့ တောငျးဆိုထားခကျြကို ထိုငျးအစိုးရက ခှငျ့ပွုပေးလိုကျတာပါ။
ဒီအကွောငျးနဲ့ပတျသကျလို့ရှပွေောငျးအလုပျသမား အခှငျ့ရေး ကှနျယကျရဲ့ဥက်ကဌ ဦးအောငျကြျောကတော့အခုလိုသုံးသပျပွောပါတယျ။
" ကမ်ဘာ့ကူးစကျမွနျ ကပျရောဂါ Covid 19 ဖွဈနတေဲ့ ကာလမှာ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ရောကျရှိပွီးသား မွနျမာ၊ ကမ်ဘောဒီးယား၊ လာအို အစရှိတဲ့သူတှကေို အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ စာရှကျစာတမျး ပွတျသှားတာ (အလုပျလုပျခှငျ့သကျတမျးထပျမဆကျနိုငျတာ) ၊ ကုနျဆုံးသှားတာတှကေို ဖွလြှေော့ပေးတာ မှနျပမေယျ့ လုပျသားတှကေိုလညျး ပွနျရသလို၊ လုပျသားတှဆေီကနေ သကျတမျးတိုးမယျ့ ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး ရရှိလာမယျ့ ငှကွေေး ကလညျးအမြားကွီးပါခငျဗြ။ နံပါတျ(၁) က သူရဲ့စီပှားရေး ကုနျထုတျလုပျမှုတှေ မကဆြငျးအောငျ ရှိပွီးသား လုပျသားတှအေားလုံးကို ပွနျထိနျး လိုကျတာ။ နံပါတျ (၂)ကတော့ လကျရှိဖွလြှေော့ပေးတယျလို့ ကမ်ဘာကိုကွညော ပမေယျ့လညျး သူတို့လိုအပျနတေဲ့ ဘဏ်ဍာငှတှေေ ရရှိအောငျလုပျတဲ့နညျးလမျးတခုလို့ပဲ သုံးသပျတယျခငျဗြ။ "
ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျး ဖွဈခြိနျတုနျးကလညျး အခုလိုမြိုး ပနျးရောကျကဒျလို့ချေါတဲ့ အလုပျလုပျခှငျ့ရှိတဲ့ အထောကျအထား လကျမှတျတှေ ထုတျပေးဖို့ ပထမအကွိမျအဖွဈ ခှငျ့ပွုပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးကလညျး မွနျမာလုပျသားတှေ သိနျးနဲ့ခြီပွီး အထောကျအထားတှေ လုပျခဲ့ပါတယျ။ အခုလုပျပေးမယျ့ အထောကျအထားလကျမှတျကတော့ ၂၀၂၃ ခုနှဈ ဖဖေျေါဝါရီလလယျ အထိ အလုပျလုပျခှငျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
အထောကျအထားလကျမှတျ မရှိတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ အတှကျတော့ ဒီလကျမှတျထုတျပေးမယျ့ အစီစဉျဟာ အကြိုးရှိပါတယျလို့ ဦးအောငျကြျောကဆိုပါတယျ။
" တရားမဝငျနထေိုငျပွီး ဘာစာရှကျစာတမျးမှ မရှိဘဲ လုပျနရေငျတော့ အလုပျရှငျတှကေလညျး နိုငျငံတျောအစိုးရက သတျမှတျပေးထားတဲ့ နှုနျးထားတှေ အတိုငျးမပေးဘဲ ထငျသလိုခိုငျးနမှော၊ ထငျသလိုလုပျကိုငျနမှော ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒါကအကြိုးအမွတျတော့ရှိပါတယျ။ "
ထိုငျးနိုငျငံတှငျး ရောကျရှိနပွေီးသား အထောကျအထားမဲ့တှအေတှကျ လာမယျ့ အောကျတိုဘာလက စပွီး လကျမှတျတှေ စလုပျပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအထောကျအထား လကျမှတျတှဟော နယျမွတေခုနဲ့တခု ဖွတျကြျောသှားလာခှငျ့တှတေော့ မရှိပါဘူး။
ထိုငျးအစိုးရကတော့ ကိုဗဈကပျဘေးကွောငျ့ ကဆြငျးနတေဲ့ စီးပှားရေးကို နာလနျထူနိုငျဖို့အတှကျ အောကျတိုဘာလက စပွီး ကူးစကျမှုထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ ပွညျနယျတခြို့မှာ ဖွလြှေော့မှုတှေ လုပျဖို့ ရညျမှနျးထားပါတယျ။ လာမယျ့ ၂၀၂၂ ခုနှဈ နှဈဆနျးပိုငျးက စပွီး မွနျမာအပါအဝငျ အိမျနီးခငျြးနယျစပျတှကေို ပွနျဖှငျ့ဖို့လညျး ပွငျဆငျထားပါတယျ။
အထောက်အထားမရှိတဲ့ မြန်မာအပါအ၀င် လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား သုံးနိုင်ငံက လုပ်သားတွေကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ အလုပ်လုပ်ခွ....
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၃၀၀ ကျော် အကြွေးတင်နေတဲ့ တရုတ်ရဲ့ အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းကြီး Evergrande က အတိုးပေးရမယ့် ရက်သတ်မှ.....
ငါးမန်းတောင်သုံးထောင်ကျော် ကိုလံဘီယာမှာ သိမ်းဆည်းရမိ
ဟောငျကောငျကို တရားမဝငျတငျပို့မယျ့ ငါးမနျးတောငျ ၃၄၉၃ ခုကို မွို့တျောဘိုကိုတာလဆေိပျမှာ သိမျးဆညျးရမိကွောငျး ကိုလံဘီယာအာဏာပိုငျတှကေ စကျတငျဘာ ၂၃ရကျနမှေ့ာ ပွောပါတယျ။ ဒီအရအေတှကျကိုရဖို့ ၃ပနေဲ့ ၁၆ပကွေား အရှယျအစားရှိတဲ့ ငါးမနျးပေါငျး ၉ဝဝကနေ ၁ဝဝဝအတှငျး အသတျခံခဲ့ရတယျလို့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအရာရှိတှကေ ခနျ့မှနျးပါတယျ။ ငါးမနျးတောငျကို ကနျြးမာရေးအတှကျ အာဟာရအစာအဖွဈ တခြို့နိုငျငံတှမှော ရောငျးခကြွတာပါ။
ဟောင်ကောင်ကို တရားမဝင်တင်ပို့မယ့် ငါးမန်းတောင် ၃၄၉၃ ခုကို မြို့တော်ဘိုကိုတာလေဆိပ်မှာ သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း ကိုလံဘီယာအာဏာပိုင်တွေက စက်တင်ဘာ ၂၃ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်ကိုရဖို့ ၃ပေနဲ့ ၁၆ပေကြား အရွယ်အစားရှိတဲ့ ငါးမန်းပေါင်း ၉၀၀ကနေ ၁၀၀၀အတွင်း အသတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေက ခန့်မှန်းပါတယ်။ ငါးမန်းတောင်ကို ကျန်းမာရေးအတွက် အာဟာရအစာအဖြစ် တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ရောင်းချကြတာပါ။
Originally published at https://burmese.voanews.com/a/6248720.html
ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ရဲ့ နိုင်ငံတကာက ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာ NUG ကို ကိုယ်စားပြုပြီး တရားဝင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့် လမ်းကြောင်းတခုရသွားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အဓိကတာဝန်တွေက ဘာတွေပါလဲ၊ ခုလက်ရှိမှာ ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေကြပြီး အခက်အခဲတွေကရော ဘာတွေရှိနေပါလဲ၊ စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး United Kingdom ဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသက်ကိုကို၊ တောင်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ NUG ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်နိုင်ထွန်းတို့ကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
#WhatIsHappeningInMyanmar #MyanmarMilitaryCoup #NUG #YanNaingTun #ThetKoKo #KyawKyawThein #voaburmese #စစ်အာဏာသိမ်းမှု #ရန်နိုင်ထွန်း #သက်ကိုကို #ကျော်ကျော်သိန်း #ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း
NUG နိုငျငံတကာကိုယျစားလှယျတှေ ဘာတှလေုပျနိုငျမလဲ ...
ကွားကာလ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ (NUG) ရဲ့ နိုငျငံတကာက ကိုယျစားလှယျတှအေနနေဲ့ သကျဆိုငျရာနိုငျငံတှမှော NUG ကို ကိုယျစားပွုပွီး တရားဝငျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခှငျ့ လမျးကွောငျးတခုရသှားတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ အဓိကတာဝနျတှကေ ဘာတှပေါလဲ၊ ခုလကျရှိမှာ ဘာတှလေုပျဆောငျနကွေပွီး အခကျအခဲတှကေရော ဘာတှရှေိနပေါလဲ၊ စတာတှနေဲ့ပတျသကျပွီး United Kingdom ဆိုငျရာ NUG ကိုယျစားလှယျ ဒေါကျတာသကျကိုကို၊ တောငျကိုရီးယားဆိုငျရာ NUG ကိုယျစားလှယျ ဦးရနျနိုငျထှနျးတို့ကို ကိုကြျောကြျောသိနျးက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
#WhatIsHappeningInMyanmar #MyanmarMilitaryCoup #NUG #YanNaingTun #ThetKoKo #KyawKyawThein #voaburmese #စဈအာဏာသိမျးမှု #ရနျနိုငျထှနျး #သကျကိုကို #ကြျောကြျောသိနျး #ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး
တောင်ကိုရီးယားက ရန်လိုတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံမှာ မြောက်ကိုရီးယားသံအမတ်ကြီးက မစွပ်စွဲမီ မိနစ်ပိုင်.....
The main entrance to the building is on C Street. Take Orange or Silver or Blue line metro and get off at Federal Center SW station.
Be the first to know and let us send you an email when VOA Burmese News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to VOA Burmese News:
ဖမ်းဆီးခံရပြီး နောက်တနေ့ သေဆုံးသွားတဲ့ ကိုဖက်တီးရဲ့အဖြစ် မိသားစုပြောချက်
ဗွီအိုအေ မြန်မာနံနက်ခင်း စက်တင်ဘာလ ၂၈၊ ၂၀၂၁။
နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၉-၂၇-၂၀၂၁)
ဗွီအိုအေ မြန်မာနံနက်ခင်း စက်တင်ဘာလ ၂၇၊ ၂၀၂၁။
VOA ရေဒီယိုညပိုင်း စက်တင်ဘာ၂၅၊၂၀၂၁
သတင်းတွေထဲက သုတ “ နျူကလီးယားလက်နက်”
လိပ်ပြာ “မကြေးမုံရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ”
အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ခရိုအေးရှား ရွက်လွှင့်ခရီးလုပ်ငန်း
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုး အစီအစဉ် တိုးချဲ့
VOA ရဒေီယိုညပိုင်း စက်တင်ဘာ၂၅၊၂၀၂၁
VOA အမေရိကန်အသံ သတင်းဌာနသည် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသော၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်များကို ကန့်သတ် ချုပ်ခြယ်နေသော ကမ္ဘာ့နေရာ ဒေသများရှိ ပြည်သူများထံသို့ ဘာသာစကားပေါင်း ၄၅ မျိုးကျော်ဖြင့် မီဒီယာလိုင်းပေါင်းစုံမှ အသံလွှင့်ပေးနေသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Multi-Media နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနကြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ထူထောင်ခဲ့သည့် VOA သည် လွတ်လပ်၊ မျှတ၊ မှန်ကန်၊ ပြည့်စုံသည့်သတင်းများ တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။ VOA သည် အမေရိကန်ပြည်သူတို့၏ အခွန်ငွေဖြင့် ထောက်ပံ့ ထူထောင်ထားသည့် US Agency for Global Media (USAGM) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမေရိကန်မီဒီယာအေဂျင်စီ အဖွဲ့ကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်သည်။ (More here: https://bit.ly/3iASvMH)